Kushungurudzwa Panyaya Dzepabonde—Chikamu 1: Ungaitei Kuti Usashungurudzwa? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Kushungurudzwa Panyaya Dzepabonde​—Chikamu 1: Ungaitei Kuti Usashungurudzwa?
Chii chinonzi kushungurudzwa panyaya dzepabonde?
Kunyange zvazvo matsanangurirwo anoitwa mashoko ekuti “kushungurudzwa panyaya dzepabonde” achisiyana-siyana zvichienderana nenzvimbo, anogona kureva kumanikidzwa kuita zvepabonde, pamwe pacho pachishandiswa chisimba. Kunosanganisira kushungurudzwa pabonde kunoitwa vana, makunakuna, kubatwa chibharo, nekubhinywa nevanhu vakaita savanachiremba, maticha kana kuti vafundisi. Dzimwe nguva munhu anokushungurudza anogona kukutyisidzira achiti ukangomhan’ara chete anogona kukuitira chinhu chinokurwadza.
Imwe ongororo yakaitwa yakaratidza kuti gore rega rega muUnited States chete vanhu vanenge 250 000 vanoshungurudzwa panyaya dzepabonde. Inenge hafu yavo vana vane makore ari pakati pe12 ne18.
Bhaibheri rinorambidza kushungurudza vamwe panyaya dzepabonde. Bhaibheri rinotaura kuti makore anenge 4 000 akapfuura kwaiva nevamwe varume vaipengeswa nekuda kuita zvepabonde, vaida kubata chibharo varume vaviri vainge vashanya muguta reSodhoma. Zvavakaita zvakabudisa pachena nei Jehovha akaparadza guta racho. (Genesisi 19:4-13) Uyezve Mutemo wakapiwa Mosesi makore 3 500 akapfuura wairambidza makunakuna, kusanganisira kushungurudza hama panyaya dzepabonde.​—Revhitiko 18:6.
Kakawanda kacho munhu waunoziva ndiye anokushungurudza. Bhuku rinonzi Talking Sex With Your Kids rinoti, “Pavanhu vatatu vanobatwa chibharo, vaviri vanobatwa nevanhu vavanenge vachitoziva. Anogona kunge ari waunenge uchidanana naye, shamwari kana kuti hama yako.”
Unogona kushungurudzwa kunyange uri mukomana kana kuti musikana. MuUnited States, pavanhu 100 vanoshungurudzwa vanenge 10 vacho varume. Maererano nesangano reRape, Abuse & Incest National Network (RAINN), varume vanoshungurudzwa “vanogona kutya kuti vanozoitwa ngochani nevanenge vachivashungurudza” kana kuti “vanozoonekwa ‘sevarume pasina.”’
Kuwanda kwenyaya dzokushungurudzwa kwevanhu pabonde hakushamisi. Bhaibheri rakagara rataura kuti “mumazuva okupedzisira” vanhu vazhinji vachava “vasina rudo rukuru rwokuzvarwa narwo,” “vanotyisa” uye “vasingazvidzori.” (2 Timoti 3:1-3) Izvi ndizvo zviri kuitwa nevanhu vanoshungurudza vamwe nechinangwa chokuda kugutsa zvido zvavo zvebonde.
Kana ukashungurudzwa haisi mhosva yako. Hapana anoda kushandiswa kuti agutse chido chepabonde chemumwe munhu. Anenge akushungurudza ndiye ane mhosva. Asiwo, une zvaunogona kuita kuti uderedze mikana yekushungurudzwa.
Gara wakagadzirira. Gara waziva zvaunogona kuita kana mumwe munhu, angava waunenge uchidanana naye kana kuti hama yako, akakumanikidza kuita zvebonde. Mukadzi anonzi Erin akati, kuti usashungurudzwa nenzira chero ipi zvayo, edza kufungidzira kuti ndokupi kwaungashungurudzwa uye kana zvikaitika uchazoita sei. Akati, “Izvi zvinogona kuita sezvisingashandi, asi kana wava mudambudziko, uchaona kuti zvinoshanda.”
Bhaibheri rinoti: “Rambai muchinyatsochenjerera kuti kufamba kwamunoita kurege kuita sezvinoita vanhu vasina kuchenjera asi sezvinoita vakachenjera, . . . nokuti mazuva akaipa.”​—VaEfeso 5:15, 16.
Zvibvunze kuti: ‘Ndingaita sei kana mumwe munhu akatanga kundibata zvandisingafariri?’
Gara waziva mabviro aunozoita kana zvinhu zvaipa. RAINN inotaura kuti “iva nenhamba kana kuti shoko zvaunogona kutumira kushamwari dzako kana vemumhuri mako zvinoita kuti vazive kuti zvinhu hazvina kukumirira zvakanaka uri kuda rubatsiro. Asi zviite nenzira yokuti hauonekwi nomunhu ari kuda kukushungurudza. Shamwari dzako kana kuti vemumhuri mako vanogona kuuya kuzokutora kana kuti vanoita zvinoita kuti uwane mabviro.” Zvinokosha kuti iwe wacho usatambira kunzvimbo dzinogona kuzokupinza panguva yakaoma.
Bhaibheri rinoti: “Munhu ane njere anoona dambudziko ovanda, asi vasina zivo vanongopfuura havo vorangwa.”—Zvirevo 22:3.
Zvibvunze kuti: ‘Kana zvinhu zvaipa ndingazobva sei?’
Gara waziva mabviro aunozoita kana zvinhu zvaipa
Zvipe mitemo​—uye usaichinja. Somuenzaniso, kana uine munhu wauri kudanana naye, munofanira kutaurirana kuti ndezvipi zvamunofanira kuita uye zvamusingafaniri kuita. Kana waunodanana naye asingadi kuti mutaurirane, kusiyana naye kuri nani wotsvaka hako mumwe anoremekedza zvaunoda.
Bhaibheri rinoti: “Rudo . . . haruzvibati zvisina kufanira, haruzvitsvakiri zvarwo.”—1 VaKorinde 13:4, 5.
Zvibvunze kuti: ‘Zvii zvandinoda? Maitiro api asina kunaka?’
Verenga unzwe zvakataurwa nevanhu vakamboshungurudzwa.
Inzwa zvinotaurwa nevechiduku vashanu nezvekushungurudzwa uye zvaungaita kana uchinge washungurudzwa.